Mari-nehupfumi, 31 Kurume 2019
Svondo 31 Kurume 2019
Kurume 31, 2019
Hama dzeMhuri yeVanhu Vana Yakapisirwa neKufira Mumba kuSouth South Africa Yotsvaga Rubatsiro Kuti Vavigwe
Imwe mhuri yemuZimbabwe yaigara kuWestern Cape muSouth Africa iri kutsvaga rubatsiro rwekunoviga hama dzavo ina kumusha kuSanyati mushure mekunge dzapisirwa mumba nemunhu anofungidzirwa kuti chizvarwa chekuSouth Africa
Zvizvarwa zveZimbabwe Makumimi Masere neZviviri (82) Zvoratidzwa kuMozambique Mushure Medutumupengo Idai
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa pandandemutande raro reTwitter kuti huwandu hwevanhu vemuZimbabwe vakafa vakavigwa kuMozambique mushure mekuyeredzwa nemashamu emvura etropical cyclone Idai hwasvika pamakumi masere nevaviri.
Bhuku raVaObasanjo naVaBiti Rinotorwa Zvechisimba neHurumende yaVaMnangagwa.
VaObasanjo vakanyora bhuku rehutongo hwejekerere muAfrica pamwe chete nemutevedzeri wasachigaro weMDC Inotungamirwa naVaNelson Chamisa, VaTendai Biti, Greg Mills uye muzvinafundo wemuAmerica, Jeffrey Herbst.
Kutsvaga Mitumbi Kwononoka neKushaya Zvikwanisiro kweHurumende
Kutsvaga mitumbi yevanhu vakashaikwa padutumupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti Cyclone Idai vanodarika mazana matatu kwave kutora nguva yakarebesa nekuti hurumende haina zvikwanisiro.
VaChari Vanoti Vatumira Vana Chiremba Kunobatsira Vakakuvadzwa neCyclone Idai
Mumwe wevanhu vakatanga hurongwa hwekutsvaga mari yekubatsira mudambudziko re Cyclone Idai, VaFreeman Chari, vanoti mari yavakwanisa kuunganidza pari zvino yave kudarika zviuru makumi masere nezvina.
Zanu PF Inonzi Iri Kunyima Rubatsiro Vanopikisa kuManicaland
Asi mumiriri weChipinge South muparamende, uye vari nhengo yeZanu PF, VaEnock Porusingazi, varamba mashoko aya, vachiti vari kutotanga kuanzwawo kubva kuStudio7.
Zimbabwe National Family Planning Council yokurudzira vanhu kuti vakurumidze kuita vana kuti vasazoshupike neMbereko.
Gurukota rinoona nezvematunhu VaJuly Moyo vanoti huwandu hwevanhu vafa nenyaya yedutumupengo kana kuti tropical cyclone Idai kuManicaland neMasvingo hurikuramba huchikwira.